Imaam Axmed Ibnu Xanbal |
← Aadabta laga rabo qofka Axaadiista akhrinaya
Imaam Maalik Ibnu Anas →
Posted on 7 Jun 2011	by Muhaditha.wordpress.com
Dhalashadiisi iyo Asalkiisa
Magaciisu waa : Axmed Ibnu Xanbal Ibnu Hilaal Aduhayli Ashaybaani Almirwazi, waxa uu ku dhashay Imaamka Bagdaad oo ah caasimada Ciraaq taarikhdu markay ahayd 164hj . Intaa kadib waxa uu ku wareegay oo cilmiga ka raacan jiray Xijaaz, Yaman iyo Dimishiq (Suuriya)
Imaamku markii uu gaadhay 15sano ayuu guda galay inuu sidii Culimada caadada u ahayd inuu raadsado cilmiga oo uu safar galo. Waxaa la sheegaa inuu culimo badan ka qaatay cilmiga. Kuwaas oo lagu qiyaasay in kabadan 300 oo sheekh.
Culimadiisa kuwa ugu caansan ama ugu waaweyn:
Imaam Shaafici < Waxuuna ka qaatay Usuulul xadiith iyo Fiqhi, sidoo kale macrifada Naasikh wal mansuukh
Imaam Sufyaan Ibnu Cuyeyna< Waxuu ahaa muxadithka Xijaaz ee markaas, waxuuna ka qaatay cilmi oo wuuna ka faaidey.
Cabdirizaaq ibnu Hamaam a Sancaani <<oo uu Yemen ugu tagay kana soo qaatay cilmi. Waxuuna la joogay muddo 2sano ah
Husheym ibnu Bashiir
Bashar ibnu Mufadhal
Nadhar ibnu Ismacil Albajli
Waliid ibnu Muslim
Yaziid ibnu Haaruun
Imaam Axmed waxaa cilmiga kasii qaatay oo arday u ahaa culimo aad u fara badan. Culimadaas oo ka weriyay isaga axadiis.
Wiilashiisii kala ahaa Cabdullahi iyo Saalax
Imaam Ibnu maajah
Ibrahim al Xarbi
Abii Zurcata Raazi
Masoo koobi karo ardayda Imaamka. Waxaase aad sawiran kartaan qiimaha uu leeyahay imaamkan weyni waxaa arday u ahaa oo axadiis ka weriyay Culimada muxadithiinta ah kuwa ugu waa weyn uguna caansan kuwaas oo lagu yeedho “Asxaabu sittah” ee kala ah Imam Bukhaari, Muslim, Tirmidi, Abiidaauud, Nisaai iyoIbnu Maajah Ilaahay dhamaantood haw naxariistee.
Imtixaankii la mariyay Imaamka
Sidaan ognahayba qofka muslimka ah ee imaanka dhabta ah laga helo waxaa badanaa uu maraa imtixaan. Hadaba Imaam Axmed waxuu ka midyahay culimada aadka loogu imtixaamay diinta Islaamka, saas daraadeena loogu Magacaabay Imam ehlu sunnah wal jameeca
Markii ay soo baxday qoladii la odhan jiray Almuctazila kuwaas oo lasoo baxay hadal aan horey loo odhan oo ah in Qur’aanku yahay makhluuq Ilaahay ,ayaa waxaa aad uga soo horjeedsaday Imaam Axmed . Markaasna waxaa muslimiinta u ahaa amiir ninka la odhan jiray Ma’muun .
Hadaba Amiir Ma’muun waxuu isna qaatay ra’yiga ay keeneen muctaziladu oo waxuu yidhi Qur’aanku waa makhluuq oo mahan hadalkii Ilaahay,waxa uuna ku amray madaxdii gobolada in la casilo qofkii aan rumaysnayn ra’yigaas.
Imaamu Axmed ibnu Xanbal waxa uu u arkay mabda’a muctasilada in uu Alle ka dhigayo fakrad xun oo jiritaankiisa aan sugayn, waxa uu ku dhaqaaqay difaacida jiritaanka Alle wayne wuuna diiday in uu aqbalo mabda’a muctasilada, inkastoo ay xiligaas culimo qaar ay aqbaleen mabda’ii muctasilada iyagoo ka baqaya Khaliifadii xukanka hayay Ma’muun iyo caruurtiisa.
Waa la xiray Imaamu Axmed si loo horgeeyo Khaliifkii Ma’muun ahaa, waxa uu Imaamu Axmed Alle ka baryay in uusan la kulmin Khaliifka, sababtoo ah Ma’muun wuxuu balan ku qaaday in uu dilayo Imaamu Axmed marka ugu horayso uu la kulmo.
Intii Imaamka la sii waday ee uusan gaarin Khaliifadii booskiisa ayaa waxaa yimid war sheegayo in uu geeriyooday Ma’muun, dib baa loogu celiyay Imamu Axmed Bagdaad xabsi baana la dhigay, waxaa xilka qabtay Ma’muun kadib Almuctasim kaas oo aad u imtixaanay Imaamu Axmed hortiisana lagu garaacay.
Imaamka xabsiga ayuu ku raagay mudo 28 bilood, markii uu Almuctasim geeriyooday waxaa xilka la wareegay Alwaathiq (Abuu jacfar Haaruun ibnul Muctasim) isna Imaamka ayuu amar ku siyay in aan magaalada lagu arag dadkana uu ka fogaado, sidii buuna yeelay ilaa uu geeriyooday Alwaathiq.
Waxaa xilka la wareegay Almutawakil oo ahaa wiil uu dhalay Alwaathiq, waxa uuna khilaafay wadadii ay mareen Ma’muun, Almuctasim iyo Alwaathiq . Wadadaas oo ahayd inay aaminsanaayeen inuu Qur’aanku yahay makhluuq Ilaahay, waxa uuna mamnuucay in muran laga sameeyo mar danbe arintaas. Waxuuna karaameeyay Imaamu Axmed ibnu Xanbal, waxa uuna u diray hadiyado iyo dhaqaale, balse Imaamka wuu diiday qaadashada wixii loo soo diray.
Hadaladii ay Culimadu ka sheegeen:
Ibraahiimul xarbi waxa uu yiri: “waxaan arkay Axmed Ibnu Xanbal, waxaad moodaa in uu Alle u kulmiyay cilmiga dadkii hore iyo kuwii danbe, dhinac walba oo wax laga su’aalo waxbuu ka sheegaa wuxuu doonana wuu ka aamusaa, mana uusan ahayn Axmed Ibnu Xanbal mid ku mashquula waxa dadka ay ku mashquulaan ee aduunya ah”.
Imaam Shaafici waxuu yidhi : Baqdaad kagama aanan iman qof ka faqiihsan , ka fadhli badan oo kana cilmi weyn Axmed Ibnu Xanbal.
Imaam Cali Ibnu Madiini waxuu yidhi: Kuma jiro saaxibadano qof ka xifdi badan Imaam Axmed.
Karamaatkuu lahaa qaar kamid ah:
Wiilkiisa Cabdullaahi waxa uu yiri: “ waxa aan arkay aabahay oo ku amray quraanjo in ay ka baxdo gurigiisa, kadib waxaan arkay quraanja madow oo ka soo baxaysa gurigiisa, maalinkaa kadibna kuma arkin gurigiisa”.
Waxa uu yiri Imaam Abul faraj Aljowzi: “markii fatahaad biyo ay ka dhacday Bagdaad 554 tii hijriga waxay biyuhu qaadeen dhamaan kutubtayda, marka laga reebo hal mujallad oo ay ku jiraan waraaqo ku qoran farta Imamu Axmed”.
Kutubtuu alifay Imaamku kuwa ugu caansan:
المناسـك الكبير والصـغير
الرد على الجهميـة
Imaamu Axmed waxa uu ahaa calim dhinaca Xadiithka, wana arinta u soora galisay in uu helo aqoon fara badan oo uu kula soo baxo axkaamta, waxa uu ku fiicnaa Cilmiga Qiyaaska ee Usuulul fiqhiga taas oo u dhawaysay in uu haleelo ujeedka aayada iyo Xadiithka Nabiga (csw) hadalkiisa ama falkiisa, aad ayaana loogu baahnaa in axkaamta axaadiithta laga soo saaro; sabatoo ah carab waxa ay ku kala baaheen magaalooyinkii dagaalada jihaadka ay ku tageenwaxaana ku noolaa ummado kala duwan, Imaamu Axmed waxa uu ka hormariyay ra’yiga iyo qiyaaska xadiithka Nabiga (csw) yuusanba sidii la rabay u hormarininee, sidoo kale waxa Imaamka dhamaystiray wadadii Imaamu Shaafici ee ahayd waynaynta Sunnada Nabiga (csw) iyo soo muujinta kaalinteeda marka la xukun la dhisayo.
Waxa uu ahaa Imaamu Axmed qof geesi ah, iimaankiisana uu ku adkaystay markii fitnada ku timid, iskana diiday fakradaha lagu soo riixayo diinta iyo caqiidada Islaamka ee saafiga ah.
Waxa uu geeriyooday Imaamka maalin Jimce ah sanadii 241 hijriga, waxa uuna jiray 77 sano. Dadka jaanaazadiisa isugu yimid waxa ay buux dhaafiyeen wadooyinka. Ragga kasoo qeyb galay waxaa tiradooda lagu qiyaasaa inay dhanaayeen 800.000. Dumarkuna 60.000, oo aysan ku jirin dadka wadooyinkaa iyo guryaha dushooda saarnaa. Waxaa kale oo la sheegaa inayba intaas ka badnaayeen.
Waxaa lagu aasay Imaamka Bagdaad, waxaa kaloo la sheegaa waxaa soo Islaamay maalinkii uu geeriyooday 20.000 oo yahuud, dab caabud ah iyo waxii lamid ahba isugu jira.
Ilaahay swt ajar iyo xasanaat haka siiyo Cilmigii uu umadda usoo kordhiyay, sidii uu sunadda Rasuulka scw u difaaci jirayna Ilaahay swt ha uga difaaco naarta. Ilaahay swt Naxariis waasic ah Imaamka korkiisa hayeelo< aamiin.
WQ: Nuux & Yusuf
View all posts by Muhaditha.wordpress.com →
This entry was posted in Imaam Axmed Ibnu Xanbal, Taariikhda Culimada Xadiith-ka. Bookmark the permalink.
2 Responses to Imaam Axmed Ibnu Xanbal
7 Jun 2011 at 10:30 pm
Masha Allah si qurux badan baad u soo diyaariseen taariikhda Imaam Axmed bin xanbal waan ka faaiideysanay Jazakumu laahu khayraa walalaha Nuux iyo Yusuf
kuwii ka faaiideysta Allah naga dhigo inagana aamin .
7 Jun 2011 at 10:51 pm
Aaamiin walaalo.. Ilaahay swt labadoodaba ajar iyo xasanaat haka siiyo